သွားနှင့်ဆိုင်သောစက်ပစ္စည်းများ၊ ကြွေထည်မြေထည်မီးဖို၊ သွားတုအတု - Zetin
Zirconia Sintering အရည်ကျိုမီးဖို
သဘာပတိ Sintering မီးဖို
MINI SINTER FUNNACE
Zirconia Block ကို
အမြန် / မြန်မြန်ဆန်ဆန်မီးဖို
ဆီလီကွန် SINTERING မီးဖို
Ltd. , Zhengzhou Zetin လြှပျစစျပစ္စည်းကုမ္ပဏီ,
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းသည်အလွန်တိုးတက်လာသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေါ် မူတည်၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပုံစံကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဝတ္ထု Coronavirus ၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများစွာကိုပိတ်ပင်ထားသည်။
အတူတူ Corona ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး!
ငါတို့ရှိသမျှသည်သိသည်အတိုင်း, လူသည်ပြီးခဲ့သည့်လများအတွင်းကော်နာဗိုင်းရပ်စ်၏ကော်မာကိုခံစားနေရသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်အလွန်ကူးစက်နိုင်သောကူးစက်ရောဂါဖြစ်သည့်နိုင်ငံများစွာသည်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံထားရသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအခြေအနေအပြင်းအထန်ရှိလင့်ကစားလိုအပ်နေသောဖောက်သည်များကိုစက်များအမြန်ပေးပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါသည်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ...
1. တံခါးပိတ်မိုက်ကိုသုံးပါ။ 2. ထိရောက်စွာလူ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲညစ်ညမ်းမှုအဆင့်ကိုရှောငျနိုငျသောအပြည့်အဝအလိုအလျှောက်စစ်ဆင်ရေးအစီအစဉ်သတ်မှတ်မည်။ အပူဒြပ်စင်ပယ်လက်သည်းနှင့်ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက် zirconia ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မလှယျကူကြောင်းကိုဒါ 3. အပူဒြပ်စင် Customize နှင့်ပိုကောင်းအောင်။ 4. အသုံးပြုခြင်း ...